50 सबै भन्दा साधारण साक्षात्कार प्रश्नहरु तपाईं साक्षात्कार मा सामना गर्न सक्नुहुन्छ | यो
3 अप्रिल 2017
50 सबै भन्दा साधारण साक्षात्कार प्रश्नहरू
साक्षात्कार प्रक्रियाको सन्दर्भमा, साक्षात्कारको लागि अनुसन्धान र व्यवस्थाले नियमको रूपमा निम्न नियममा यसलाई बनाउनका लागि तपाईंको फरक निर्णय गर्दछ। एक सम्भावित कर्मचारी कर्मचारी भेट्नको लागि सबैभन्दा उत्तम उपाय मध्ये सबै साक्षात्कार प्रश्नहरूको लागि तपाईंको प्रतिक्रियाहरू हटाउनको लागि - यहाँ सम्म कि निरपेक्ष असामान्य।
तपाईंलाई मद्दत गर्न, यो एकदम ठूलो साक्षात्कार साक्षात्कार प्रश्न आवेदकहरुलाई पत्ता लगाउन को लागी एक विशाल संख्या को साक्षात्कार सर्वेक्षण को माध्यम ले फिल्टर गरे पछि देर देखि साक्षात्कार संग पूछा। यस तरिका, बन्द मौकामा तपाईंसँग सम्भावित कर्मचारीसँग मिलेर मिलाएको व्यवस्थित छ, एक दर्पण भन्दा पहिले छुट्यो वा साथीसँग सोध्नुहोस् वा सँगै सम्बन्धित प्रश्नहरूको जवाफहरूमा धुनसँग सम्बन्धित छ ताकि तपाईं आफ्नो उत्तम पाटो राख्न तयार हुनुहुनेछ। अगाडि।
धेरै साधारण साक्षात्कार प्रश्नहरू
तिम्रो गुणहरू के हो?
तपाईका कमजोरीहरू के हुन्?
के तपाईं यात्रा गर्ने भन्ने कुरा सही छ?
किन तपाईं काम गर्दै हुनुहुन्छ [यहाँ संगठनको नाम घुसाउनुहोस्]?
तपाई किन आफ्नो वर्तमान संगठन छोड्न चाहनुहुन्छ?
त्यहाँ [सम्मिलित मिति] र [मिति सम्मिलित गर्नुहोस्] को बीचमा तपाईंको काममा कष्ट भइरहेको थियो?
तपाईले हामीलाई प्रस्ताव गर्न सक्नुहुनेछ कि अर्को व्यक्ति सक्नुहुन्न।
तपाईं पांच वर्षमा आफैलाई कहाँ देख्नुहुन्छ? दस वर्ष?
के तीन कुरा के हो तपाईका अघिल्लो निर्देशकले तपाइँ लाई बढाउन चाहन सक्छ?
के यो जान्छ कि तपाईं जान्नुहुनेछ?
मलाई एक त्रुटि भएको अवधिको बारेमा मलाई सिकाउनुहोस्।
तिम्रो कल्पनाको काम के हो?
मलाई एक उपलब्धिको बारेमा जानकारी दिनुहोस् तपाईं संग धेरै खुसी हुनुहुन्छ।
तपाईंको सम्बद्ध विशेष अपमानजनक के हो?
कार्यमा प्रारम्भिक 30 दिन / 60 दिन / 90 दिनहरूमा समाप्त गर्न के आशा गर्न सक्नुहुन्छ?
तपाईंको पुन: सुरुवात बारे कुरा गर्नुहोस्।
तपाईंको प्रशिक्षक संस्थाको बारेमा कुरा गर्नुहोस्।
आफैलाई जोड दिनुहोस्।
मलाई थाहा छ कि तपाई एक समस्याको ख्याल राख्नुभयो।
हाम्रो लागि अनुबंध गर्न किन यो राम्रो विचार हुन सक्छ?
तपाईं कसरी यो स्थितिको हावा पकडाउन सक्नुहुन्छ?
के तपाईं हप्ताको अवसर / अन्त्य काम गर्नुहुनेछ?
तपाईंको क्षतिपूर्ति आवश्यकताहरू के हो?
तपाइँ किन अर्को व्यवसायको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ?
तपाईं एक उद्यम को लागि आवश्यक पूर्वनिर्धारित भन्दा राम्रो भए एक अवधि दिनुहोस्।
तपाइँका द्रुत रिपोर्टहरू तपाईंको सन्दर्भमा के हो भन्न सकिन्छ?
तपाईले के गर्नु हुन्छ?
तपाईंको पहुँच के हो?
हाम्रा प्रतिद्वंद्वहरू को हुन्?
तपाईंको गाइड को हो?
तपाईंको सबैभन्दा ठूलो निराशा के थियो?
मलाई एक अवधिको बारेमा जानकारी दिनुहोस् जब तपाईं आफ्नो प्रबन्धकसँग विरोध गर्न सक्नुहुन्न।
हाम्रो सीईओ को नाम के हो?
तिम्रो पेशाका उद्देश्यहरू के हो?
तपाईं कसरी वजनको साथ व्यवहार गर्नुहुन्छ?
तपाईका पर्यवेक्षकहरूको गुणहरू / कमजोरीहरू के थिए?
तपाईलाई बिहान के हुन्छ?
यो भन्न छ कि तपाईं अग्रगामी हुनुहुन्छ वा समर्थक हुनुहुन्छ?
कुनै खास कारणको लागि तपाईंले प्रयोग गर्नुभएको अन्तिम पुस्तक के थियो?
बन्द मौकामा मैले यस समय आफ्नो पर्यवेक्षकलाई फोन गरें र उहाँलाई सोधे कि एक क्षेत्र हो जुन तपाईले बढाउन सक्नुहुनेछ, उसले के भन्न सक्छ?
तपाईले अजीब बनाउनुहुन्छ?
तपाईंको अवकाश गतिविधिहरू के हो?
तपाईंको केहि प्राधिकारीको के हुन्?
तपाईं कसरी कसैलाई आगो लगाउन सक्नुहुन्छ?
के तपाइँ 40 + घण्टा सात दिन काम गर्नुहुन्छ?
तपाईं कसरी क्रोध वा गुस्सा क्लाइन्ट व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ?
तपाईले यस उद्योगमा काम गर्ने बारे सबै भन्दा कम र थोडा सबैलाई मनपर्छ?
मैले कस्ता प्रश्नहरू सोधेको छु?
तपाईका लागि कस्ता प्रश्नहरू छन्?
यी प्रश्नहरू सामान्यतया अय्यूबको लागि एक साक्षात्कारको समयमा सोधिएको छ, धेरै अप्रत्याशित र टाढाको फरक प्रश्नहरू पनि सोध्न सकिन्छ।
कम्युनिष्टमा जवाफ दिन नबिर्सनुहोस् कि तपाइँ एक साक्षात्कारको क्रममा के सोधिने अन्य सामान्य प्रश्नहरू के थिए?